दुई पटक जाँच गर्दा पनि भेटिएन कोरोना, ३ दिनमै गयो नेपालीको ज्यान – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/दुई पटक जाँच गर्दा पनि भेटिएन कोरोना, ३ दिनमै गयो नेपालीको ज्यान
काठमाडौँ । बेलायतमा कोरोना संक्र मणबाट फेरि अर्को नेपालीको ज्या न गएको छ। झापा घर भइ अहिले बेलायतको रेडिङमा बस्दै आएका हंसराज लिङ्देनको बुधबार रोयल बर्कशायर अस्पतालमा निधन भएको हो। कोरोनाको लक्षण देखिएपछि उनी तीन साताअघि अस्पताल भर्ना भएका थिए। तर दुई पटक परीक्षण गर्दा पनि उनमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थिएन ।
तेस्रोपटक परीक्षण गर्दा मात्रै उनमा कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएको थियो । कोरोना पुष्टि भएको ३ दिनपछि उनको निधन भएको उनका नातेदार विजयविक्रम लिङ्देनले जानकारी दिए। लिङ्देन सुगर र प्रेसरका विरामी थिए। उनलाई श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि अस्पताल लगिएको थियो श्रीमती र दुई छोरीका साथ १४ वर्षदेखि रेडिडमा बस्दै आएका लिङ्देन झापा खुदुनाबारीको जनता माध्यामिक विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक थिए।
‘जमातीबाट होइन विद्यार्थीबाट फैलियो कोरोना’ उदयपुर : कोरोना भाइरस संक्रमित क्षेत्र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–३ भुल्केमा पहिलोपटक प्रदेशका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले उपस्थिति जनाएका छन् । उनले संक्रमणपछिको अवस्था, रोकथाम, नियन्त्रणका प्रयासलगायत स्थानीयका समस्याबारे सरोकारवालासँग छलफल गरे । सेनाका पूर्वी पृतनापतिसहित आएका मन्त्री घिमिरेलाई जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्यकर्मीसहित ११ जनाले पछिल्लो घटनाक्रमबारे जानकारी गराए ।
करिब अढाई घण्टाको छलफलमा उठेका विषयको जवाफ दिँदै उनले संक्रमण कहाँबाट फैलियो भन्ने अन्तिम टुंगोमा प्रदेश सरकार पुग्न लागेको बताए । उनले भने, ‘भारतको युपीमा उर्दु भाषा अध्ययन गरेर फर्किएका र दुबईबाट आएकामध्ये एक जनाबाट संक्रमण फैलिएको निष्कर्षमा हामी पुग्न लागेका छौं ।’ भारतबाट आएका १२ जमातीले संक्रमण ल्याएको भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त नरहेको घिमिरेले दाबी गरे । सूक्ष्म अध्ययनले भारतबाट आएका युवाकै घरका पाँच सदस्यमा संक्रमण फैलिएको देखिएको उनले बताए ।
‘अरू भन्दा पनि ती युवाबाटै संक्रमण फैलिएको भन्नेमा हामी पुगिसकेका छौँ, यद्यपि दुबईबाट आएकाको पनि बुझ्दै छौं’, मन्त्री घिमिरेले भने । संक्रमण पुष्टि भएकाहरूले यस बीचमा संगत गरेका र उनीहरू कहाँ–कहाँ पुगे भन्ने विवरण खोजी गरी उपचार विधिलाई फराकिलो बनाइने उनको भनाइ छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा संक्रमितको सम्पर्क २ सय ५१ जनासँग पुगेको विवरण प्राप्त भएकाले सबैको परीक्षण चाँडै गरिने घिमिरेले बताए ।
कोसी अञ्चल अस्पतालमा सय जना संक्रमितको उपचार गराउने क्षमता रहेको र त्यसले धान्न नसक्ने देखिएकाले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि उपचार हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए । उदयपुरमा कोरोनो उपचार केन्द्र बनाउन एक करोड बजेट विनियोजन भइसकेको जानकारी दिँदै घिमिरेले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन अस्पताल विकास समितिलाई निर्देशन दिए । तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभावमा यसअघि उपचारमा ढिलासुस्ती भएको बताए ।
छलफलमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख मोहन सुवेदीले उपचारको फ्रन्ट लाइनमा खट्न दक्ष जनशक्ति, स्वास्थ्य सामग्री, सुरक्षा कवज र अन्य सामग्री अभाव रहेको अवगत गराए । जिल्लाका विभिन्न भेगमा ४ सय ५ जनामा गरिएको स्वाब परीक्षणमध्ये २८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको उनले बताए । त्रियुगा नगर प्रमुख बलदेव चौधरीले संक्रमित आउजाउ भएका २ सय ५ जनाको स्वाब र २ हजार १ सय जनाको ¥यापिड परीक्षण तत्काल गर्न ध्यानाकर्षण गराए । स्वाब परीक्षण धरान र विराटनगरमा मात्रै हुँदा संकलनलगायत प्राविधिक काममा असहज भएको उनले बताए ।
संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि उदयपुरलाई सिल गर्ने निर्णय भए पनि अन्य प्रदेशसँग समन्वय नहुँदा बाहिरबाट आउनेको संख्या नरोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पहाडीले जानकारी दिए । ‘यो बेला ऊ र त्यो भनेर एकअर्कामा दोषारोपण गर्नुभन्दा सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ’, उनले भने । सो अवसरमा प्रदेश सांसद विमल कार्की, नारायण बुर्जामगर, अम्बिका थापा, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख खड्गबहादुर परियारले लकडाउन थपिँदै जाँदा किसान, मजदुरको जीवनयापन कष्टकर बनेको, किसानले खेती र उत्पादन गरेका वस्तु बिक्री गर्न नपाएको बताए ।
अस्पतालमा आएका बिरामीलाई चिकित्सकले उपचार गर्न नमान्ने, एम्बुलेन्स चालकले बिरामी बोक्न नमान्नेजस्तो समस्या देखिएको उनीहरूले अवगत गराए । यहाँ संक्रमित संख्या २८ जना पुगेसँगै प्रशासनले लकडाउन थप कडाइ गर्दै संक्रमित क्षेत्र पूर्ण रूपमा सिल गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले घेरा हालेको छ । आउजाउमा पूर्ण रोक लगाइएपछि स्थानीयको दैनिकी असहज बन्दै गएको छ ।
संक्रमित क्षेत्रमा डब्लुएचओका प्रतिनिधि कोरोना प्रभावितको अवस्था र यसबाट सिर्जित समस्या बुझ्न विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का प्रतिनिधि डा. राजन पटेल उदयपुर आइपुगेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुका इडिसिडीका प्रतिनिधि लीलाविक्रम थापा, प्रदीप रिमाल, पशुसेवा विभागका डा. सृजन रानाको टोली बिहीबार दिउँसो प्रभावित क्षेत्र त्रियुगा नगरपालिका–३ भुल्केमा आएको हो ।
मनका धनि यी जोडीले बाँडे १२५ मजदुर परिवारलाई राहत